Dani Carvajal oo saadaal ka bixiyay saddexda xidid ee isugu soo hari doonta ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or – Gool FM
Dani Carvajal oo saadaal ka bixiyay saddexda xidid ee isugu soo hari doonta ku guuleysiga abaal marinta Ballon d’Or
(Real Madrid) 26 July 2018. Difaaca kooxda Real Madrid Dani Carvajal ayaa shaaca ka qaaday seddexda musharax ee ku dagaalami doonta abaalmarinta Ballon d’Or oo ah mid ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan dhanka taageerayaasha iyo warbaahinta.
Dani Carvajal ayaa musharaxa ugu horeeya ee ku guuleysan kara ee abaal marinta xiisaha badan ee Ballon d’Or ka dhigay saaxiibkiis kooxda Rea Madrid Luka Modrić, kadib markii uu Real Madrid ku hogaamiyay ku guuleysiga Champions League, isla markaana uu xulkiisa Croatia ku hogaamiyay in booska labaad ay ka galaan koobka aduunka 2018.
Sidoo kale Dani Carvajal ayaa u arka in saaxiibkiis hore ee Cristiano Ronaldo uu u qalmo booska kaalinta labaad, halka Lionel Messi uu dhigay kaalinta saddexaad.
Difaaca kooxda Real Madrid ayaa meesha ka saaray dhamaan ciyaartoyda Faransiiska ah ee ku guuleystay Koobka Aduunka, oo uu ku jiro Raphael Varane ee kuwada guuleestay koobabka Champions League iyo Koobka Adduunka.
“Aniga ahaan, Luka Modrić, Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi sida ay u kala horeeyaan ay u kala mudan yihiin abaal marintan”.
“Luka Modrić ma ahan kaliya wax qabadkiisa uu kaga sameeyay xulkiisa Croatia koobka aduunka, ee waa mashiinka kooxda, Modrić wuxuu ka ciyaarayaa boos kasta uu doonayo, weerar iyo difaac, si wanaagsan ayuuna u garanayaa xiliga uu doonayo inuu dhaqaaqo”.
Dimitar Berbatov oo saadaaliyay AFARTA kooxood kaalmaha sare kaga dhamaysan doono Premier League xili ciyaareedka cusub
Massimiliano Allegri oo ka warbixiyay booska uu Cristiano Ronaldo kaga ciyaari doono kooxda Juventus